> Resource > Lugood > Sida loo beddel maqaarka Lugood ah
Haddii aniga oo kale oo aad caajistay la default maqaarka Lugood, ka dibna waxa la joogaa wakhtigii si ay u bedesho qaabka aad ugu jeceshahay. Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa sida loo beddelo, qarbeddaduna waa Lugood ee Windows iyo Mac. Laakiin maskaxda ku hay in la beddelo maqaarka Lugood hoos u dhici doono xasiloonida ee Lugood.
>> Hel Wondershare Free YouTube Downloader inaad kala soo baxdo wax videos for Free YouTube
Beddel Lugood haragoodu in Windows
Ka hor inta Lugood 7, waxaa jira plugin caan ah Lugood loo yaqaan Multi-plugin oo awood fudayd ee beddelo hargahood oo Lugood. Si kastaba ha ahaatee, plugin kooxda horumariyo ayaa joojiyay in ay ka shaqeeyaan. Haddii weli aad isticmaalaya Lugood 7 ama hore, Multi-plugin waa xaqiiqo ah waxa aad rabto in aad beddesho ayaa qarbeddada kala Lugood. Bishaaradayda waa in kale qarbeddada ayaa haatan dad badan Lugood waxaa lagu bixiyay xirmo EXE si aad yaabaa rakibi ah maqaar cusub oo Lugood ay si fudud u riixaya laba aad mouse, oo halkaas waxaad ugu tagaan. Download maqaarka Lugood free halkan.
Marka loo eego xal u maqaarka caadiga ah ee Lugood, SkiniTunes gebi ahaanba kala duwan. Waxay siisaa ciyaartoyda standalone oo aad gebi xakamayn karo qarbeddada kala dildillaacinaya, hotkeys, lyrics iyo aad u badan, laakiin waxa ay weli saldhigyadii Lugood. Badan oo ku saabsan Baro SkiniTunes .
Beddel Lugood haragoodu ee Mac
Users Mac sidaas ma aha nasiib leh dadka isticmaala Windows. Laakiin waxaa weli jira samaynta dad badan oo la abuuro haragoodu Lugood u Mac iyo wadaagaan internetka. Waxaan la baadhay, oo helay qaar ka mid ah halkan . Waxaad kala soo bixi laga yaabaa in aad bedesho maqaarka Lugood u dareen cusub inta dhegaysiga muusikada.
Hel Free Lugood haragoodu
Halkan waa maqaal ku saabsan sida ay u soo bixi hargahood oo Lugood free labada Windows iyo Mac. waxaa Fiiri .